Glass Greenhouse, Multi-taako Greenhouse, Greenhouse Smart - Hanyang
dhalooyinka lagu koriyo
aqalka dhirta lagu koriyo oo qudaar
koriyo makhaayad dhawrista
System & Qalabka
Greenhouse qalabka kale ee
Greenhouse Qingzhou Hanyang Project Co., Ltd horumarisa ka Qingzhou Xianke Device Farsamada Co., si Ltd si loo daboolo baahida horumarinta ee alaabta. Qingzhou Xianke Farsamada Device Co., Ltd waxaa la aasaasay sannadkii 2010, oo waxa loo soocay in design, cilmi baarista iyo wax soo saarka ee lagu koriyo injineernimada iyo ciid machinery.After macdanta sannado badan oo horumarineed, wax soo saarka xirfadeed iyo dhismaha, 2016 Shirkadda aasaasay hoosaad Greenhouse shirkadda Qingzhou Hanyang Project Co., Ltd, Hanyang beeraha ku takhasusay design lagu koriyo, wax soo saarka, dhismaha, beerista iyo adeeg-iib aheyn ka dib.
Shirkadda daboolayaa meel ka mid ah in ka badan 15000 mitir oo laba jibbaaran, iyo xisaabay in saddex-meelood laba ka mid ah aagga oo dhan isweydaarsiga saaridda. workshop soo saaridda ku qalabeysan yahay goobaha dhamaystiran iyo dhismaha xafiiska waa nadiif ah oo hagaagsan. Haddaba shirkadda ayaa qarka u saaran waaxda wax soo saarka, waaxda shaqaalaha, waaxda iibka, R & D waaxda, waaxda design, wax iibsiga waaxda iyo waaxaha kale. Shaqaalaha Xafiiska muddo dheer deggan qiyaastii 20 qof, 15 injineerada farsamo, shaqaalaha warshadda waa mid deggan, waayo, wakhti dheer in ka badan 50 qof, shaqaalaha dhismaha 108 oo qof, inta badan waa shaqaalaha farsamada xirfad leh in ku hawlan in industry this sanado badan .
sannado badan ee hawlgalka iyo cilmi ka dib, aan u isticmaalno tayada wax soo saarka aad u fiican iyo ka dib-iibka adeeg inay ku guuleysato macaamiisha lana abuuro suuqyada gudaha iyo dibadda deggan. Ilaa hadda, waxyaabaha aannu ka iibiyey in ka badan 30 gobol, degmo, iyo gobollada goboleedka, iyo si guul leh dhoofiyo Russia, India, Koonfur Afrika, Vietnam, Bangladesh, Singapore, Nigeria, Kenya, Togo, Congo iyo wadamada kale iyo gobollada. Waxaan helay aqoonsado loona saxiixo ballaadhan iyo xiriirka iskaashi muddo dheer la aasaasay macaamiisha gudaha iyo dibada.
The alaabta ugu wanaagsan, adeega tayada fiican, qiimaha lowset ah, HanYang soo dejin doonaa muuqaal dheeraad ah si deyrkaaga, waxaan ku faraxsanahay in aad ugu adeegno, waxaad tahay doono soo dhaweynayaa in ay la tashadaan.